Maitiro Ekuwana Imba kana Hofisi Rezinesi Rezinesi - Zvinyorwa
ford sync usb haina kuzivikanwa
maitiro ekushandisa apple wallet app
nei yangu imessage isingaite
unochinja sei vibration pane iphone 7
Maitiro Ekuwana Imba Kuchenesa Rezinesi
Maitiro ekuwana rezinesi rekuchenesa imba.
Kwokutenga imba kana rezinesi rekuchenesa mahofisi. Usati watanga rako rekuchenesa bhizinesi, iwe uchazoda zvese rezinesi rekutengesa uye Kuita Bhizinesi Sekunyoresa ( DBA ).
Ndeipi rezinesi inodiwa kutanga bhizinesi rekuchenesa? Usati watanga rako rekuchenesa bhizinesi, iwe unozoda zvese rezinesi rekupa uye Kuita Bhizinesi Se (DBA) kunyoreswa. Ita shuwa kuti une marezinesi ese ari maviri usati wapa masevhisi ako.
Shall tarisa nedunhu rako kuona kana vachida rezinesi rebhizinesi. Dzimwe nyika dzinoda kuti iwe uve nerezinesi, nepo vamwe vasina. Pazasi pane chinongedzo kune Chidiki Bhizinesi Association, kwaunogona kuona kana nyika yako ichida rezinesi. http://www.sba.gov/content/what-state-licenses-and-permits-does-your-business-need
Inonzwisisika sosi yemabhizimusi madiki uye ma freelancers. http://www.irs.gov/businesses/small/
Ungatanga sei bhizinesi rekuchenesa hofisi . Usati waita yako yekutanga kuchenesa, iwe uchafanirwa kusarudza kuti chii mamiriro ekutengeserana ndichave. Iwe unozobva wada kunyoresa zita rekambani yako kuhofisi yako yekunyora zvitupa kana uri kunyoresa sewe wega muridzi, kana kuhofisi yaSecretary of State kana iwe ukaumba LLC .
Iwe unogona kuzviita iwe pachako kana iwe unogona kuve nepamhepo epamutemo gwaro sevhisi senge LegalZoom zviitire iwe. Kana iwe uchingotanga uye usina vashandi, unogona kunyoresa sewe wega muridzi kusvikira iwe uine rimwe basa.
Kana iwe uri kuhaya vashandi kana usingade kubatanidza bhizinesi rako nenhamba yako yekuchengetedzeka munharaunda pamitero yako, uchafanirwa kuwana Nhamba Yekushandira Mushandirwi (A) kubva ku IRS.
Iwe unozofanirwa kutarisa neguta rako remunharaunda kana dunhu kuti uone kana paine chero rezenisi rekugadza nzvimbo kana mvumo inodiwa kune rako bhizinesi. Unogona kuwana ruzivo urwu nekutaurirana neguta rako remunharaunda kana mahofisi ehurumende. Heino runyorwa rwe SBA wepa mamiriro emahofisi ekupa marezinesi ebhizinesi waunogona kutaura naye kuti uwane ruzivo urwu.
Chekupedzisira, mushure mekunge wanyoresa bhizinesi rako, tora magwaro ako ese ekunyoresa wozarura yekutengesa kuongorora account . Izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo iwe usiri kuda kusanganisa yako yekuchenesa mari neako wega yekutarisa account. Izvi zvakakoshawo kune huwandu hwemari yekubika uye kuongorora bhizinesi rako, kunyanya kana uchichengeta rako bhizinesi mari uye mari kana zvasvika pakunyorera mutero.
Kuchenesa Marezinesi Ebhizinesi Kuongorora
Pane zvikonzero zvakasiyana siyana nei ungangoda kutanga bhizinesi rekuchenesa. Kumhanyisa rako wega bhizinesi rekuchenesa kunogona kuita basa rine mari, uye kune vazhinji, kuve nebhizinesi diki zvakare kunonakidza.
Paunenge uchipa zvekushambadzira uye zvekugara zvekuchenesa masevhisi, uchave nekwaniso yekupedzisa akati wandei akakosha mabasa:
Iko kugona kumisikidza yako wega maawa.
Kuvaka yakasimba vatengi.
Kuwedzera bhizinesi rako kuti ugone kuwedzera purofiti yako.
Munenge munzvimbo dzese dzenyika, iwe uchafanirwa kuwana rezinesi rebhizinesi usati watanga rako rekuchenesa bhizinesi. Marezinesi ebhizinesi akakosha nekuti anoita chokwadi chekutevedzera mitemo inoshanda kubhizinesi rako uye inokutendera iwe kubhadhara mitero yako nemazvo. Zvakare, kana iwe uchihaya vashandi vekunze kune rako rekuchenesa bhizinesi, iwe uchazoda rezinesi rebhizinesi kuitira kuti uzadze anodiwa maI-9 mafomu.
Kana iwe uri kufunga kutanga bhizinesi rekuchenesa, iwe uchafanirwa kusarudza kuti wotenga franchise here kana kutanga bhizinesi rakazvimirira. Kutanga rako rekuchenesa bhizinesi rakachipa pane kuvhura franchise. Kune rimwe divi, iwe ungangove unobudirira zvakanyanya pakutanga paunotanga franchise sezvaunowanzo kupihwa neyakagadzirira-kuenda-kuenda yekushambadzira chirongwa. Zvisinei nesarudzo yaunosarudza, iwe uchazoda rezinesi rebhizinesi, pamwe nemidziyo uye zvekushandisa, usati watanga kupa masevhisi ekuchenesa.
Chinangwa chemakambani ekuchenesa ndechekuita purofiti nekupa masevhisi ekuchenesa kuzvivakwa zvekutengesa nedzimba dzekugara. Paunenge wagadzirira kutanga rako rekuchenesa bhizinesi, iwe unozofanirwa kutenga Yekuita Bhizinesi Se (DBA) kunyoresa uye mutengesi rezinesi.
Iwe unogona kuwana kunyoreswa kweDBA kunyorera kubva kune yako County manejimendi hofisi kana iyo county mabharani hofisi. Pedzisa kunyorera uye wozotumira mukati nemari inodiwa. Kana iko kunyorera kuchinge kwagadziriswa, bhizinesi rako rinenge rakanyoreswa zviri pamutemo.
Usati waendesa kunyorera kwako kunyoreswa kweDBA, uchafanirwa kutsvaga zita rebhizinesi rako. Zita rako rinofanirwa kuve rinobata uchiratidza masevhisi aunopa. Yako mupi rezinesi ichapihwa kana yako DBA chikumbiro ichibvumidzwa. Iri rezinesi rinokutendera iwe kutora mutero wekutengesa kubva kune vatengi vako, izvo zvinodikanwa mumatunhu mazhinji.
Kana iwe ukasarudza kuvhura bhizinesi rako usati watanga kuwana rezinesi rebhizinesi, unogona kusangana nezvirango zvakakomba kana iwe ukawanikwa uchishanda pasina rezinesi. Kusawana rezinesi rebhizinesi kunogona zvakare kuwedzera yako yekubhadhara mutengo. Makambani ekuchenesa anowanzo tenga zvavanowana kubva kune vatengesi, avo vanowanzo tengesa zvigadzirwa zvavo kumakambani ane marezinesi.
Kutanga bhizinesi rekuchenesa
kutanga bhizinesi rekuchenesa muhofisi .
Nhanho yekutanga iwe yaunofanira kutora riini tanga bhizinesi rekuchenesa bhizinesi iri kusarudza chaizvo zviyero zvivakwa zvaunoda kuchenesa. Kunyangwe paine kazhinji paine mari yakawanda mukuchenesa zvivakwa zvakakura zvebhizimusi, kutora mabasa makuru akadaro paunenge uchangotanga kungave kwakaoma. Kusarudza saizi yezvivakwa zvaunoda kuchenesa zvinokubatsira iwe kuona kuti ndeapi makambani aunofanira kushambadza masevhisi ako. Inenge mhando dzese dzechivakwa chekutengesa dzinoda kucheneswa sevhisi.
Kana iwe ukafunga kuchengeta zvivakwa zvidiki, kune akati wandei marudzi emabhizinesi maunogona kuwana basa.
Zvitoro zviri nyore.
Mumazuva ekutanga ebhizinesi rako, iwe unofanirwa kutsvaga yekuchenesa mabasa iwe aunogona kuzviitira wega. Paunenge iwe wawana ruzivo uye bhizinesi rako ratanga kukura, unogona kukwereta vashandi kuitira kuti utange kutanga kugamuchira makuru ekuchenesa mapurojekiti.
Mushure mekusarudza kuti uchenese dzimba huru kana diki dzekutengesa, unofanirwa kusarudza zita rebhizinesi rako. Nepo zita rako rebhizinesi richifanira kunge risingakanganwike, iwe unofanirwa kudzivirira kusarudza zita rinotyisa, nekuti izvi zvinogona kudzima vazhinji vevatengi vako. Sarudza zita rine hunyanzvi uye unotaurira vatengi vako izvo chaizvo zvavanotarisira kana ivo vachikupa basa.
Ndedzipi mhando dzemasevhisi auchapa?
Imba yekuchenesa uye yekuchenesa masevhisi
Kazhinji pane matatumhandozvakasiyana nemasevhisi ekuchenesa dzimba anopiwa nemakambani ekuchenesa dzimba: kugara, kutsva / kutsvaira zvakadzama, uye kufamba / kufamba. Pamusoro pezvo, aya masevhisi anowanzo kupihwa seyese-yenguva sevhisi kana pazvinowanzoitika, senge vhiki nevhiki, biweekly, uye pamwedzi.
Hofisi diki yekuchenesa masevhisi
Kuchengeta dzimba nekuchenesa masevhisi kazhinji anosanganisira madiki ekuchenesa mahofisi pane avo runyorwa rwe masevhisi. Musiyano chete pakati pekuchengetera pekugara uye diki hofisi ndeyekuti hofisi inoda kubhowa nekukorobha pasi uye inguvai yezuva yauchachenesa. Zvekuchengetera pekugara, maawa acho anowanzo kuve 7:30 a.m. na5: 00 p.m. Zvekuchenesa hofisi diki, unogona kubvunzwa kuchenesa panguva dzebhizinesi kana mushure mekuvharwa kwehofisi.
Zvekushambadzira zvekuchenesa masevhisi
Kutanga basa rekuchenesa rekushambadzira iri bhizimusi rakasiyana zvachose pane yekuchenesa pekugara. Ini pachangu ndinomhanyisa yekugara yekuchenesa imba, saka handina kana ruzivo rwakananga nekushambadzira kwekuchenesa.
Zvandinoziva ndezvekuti mabasa ekutengesa akakurisa uye anoda vashandi vakakura. Zvakare, kuwanda kwekuchenesa kunowanzo husiku mushure memaawa ebhizinesi uye kune yakasarudzika mitengo yemitengo inosanganisira madhiri. Kuchenesa mabasa anodawo akasiyana hunyanzvi seti, senge maitiro ekuchengetedza pasi pekutengesa nemabhafa uye polishers.
Maitiro ekuchaja masevhisi ako
Usati watanga kuchenesa, unofaniraziva marii yekuchaja yekuchenesa imba. Iwe unogona kugadzirisa izvi nekuverenga kuti zvinotora nguva yakareba sei iwe kana vashandi vako kuchenesa nzvimbo yega yega yeimba uye kuona kuti chiyero chako cheawa chichava chii.
Nzira yakanakisa yekugadzirisa izvi ndeyekufonera makambani ekuchenesa ari munharaunda yako uye uwane fungidziro yevhiki mbiri yeimba yako kana yemitezo yemhuri kana shamwari. Mushure mekupihwa kupihwa mitengo kweyekutanga uye biweekly yekuchenesa huwandu, iva nechokwadi chekubvunza kuti kuchenesa kwekutanga uye kunodzokororwa kwevhiki mbiri kunotora nguva yakareba sei. Zvakare, bvunza kuti vangani vachenesi vavachatumira kuti vaite basa.
Tora mutengo wese wakakamurwa nenguva yauchazotora kuchenesa. Iyo nhamba yaunowana ichave iri awa reti mwero yavanobhadharisa. Semuenzaniso, kwekutanga kuchenesa kunodhura $ 150 uye kunotora maawa mashanu = $ 30 paawa.
Wobva watora avhareji ese ese ekuchenesa masevhisi awakatora makotesheni kuti uwane yako yeawa mwero. Paunenge iwe wafunga pane yako yeawa mwero, iwe uchawedzera yako mwero nenguva iyo yainotora iwe kana vashandi vako kuchenesa dzimba kusvika pamutengo wako.
Zvichitaurwa zviri nyore, mutengo wako ndiwo mwero wako weawa wakawedzeredzwa nenguva yainotora yekuchenesa. Saka semuenzaniso, kana imba ikatora maawa mana kuchenesa uye muyero wako weawa uri madhora makumi matatu, saka iwe waizoverenga $ 30 paawa x maawa mana = $ 120 (quote yaunopa kumutengi).
Maitiro ekuchaja kushambadzira kuchenesa
Kubhadharisa kwekuchenesa mabasa ekutengesa zvakatosiyana pane kubhadharisa yekuchenesa dzimba dzekugara. Iwe uchazofanirwa kuona kuti yako yeyero chiyero chii, pamwe neyako yekugadzira mareti (mangani mativi tsoka tsoka vako vanochenesa muawa rimwe). Kune zvakare akasiyana mitsara zvinhu zvekutarisa kana uchichenesa mahofisi mahombe. Heino chikuru pdf kubva TheJanitorialStore.com pamusoro penzira yekuchaja yekuchenesa zvekutengesa.
Maitiro ekupa fungidziro kana kupa
Chivabvutanga kupa fungidziro dzekuchenesa dzimbakune vangangozova vatengi kana iwe waverenga kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti iwe kana vashandi vako kuchenesa imba uye huwandu hweyero yako yeawa.
Pane zvimwe zvekufunga zvinosanganisirwa kana uchipa fungidziro, seyakanyanya mari yaunobhadharisa kune yakawedzera square footage, yakaoma pasi maringe nemakapeti, master bath yekugezesa yekugezera izere, imwe-nguva maringe nekudzokorora kuchenesa, kugara uchienzanisa nekuchenesa kwematsutso, nezvimwe. .
Sezvo nemamwe mabhizinesi mazhinji anoshandira, pane nzira nhatu dzekuendesa iyo kota kune vako vatengi: kumba, nefoni, kana kuburikidza neemail chikumbiro email kuburikidza newebsite yako. Iwe unozofanirwa kugadzira pepa remutengo kana kushandisainofungidzira karukureta muPanzvimbo pekuyedza kufungidzira kana kuverenga mitengo mumusoro wako kana uchitaura nemutengi parunhare kana iwe uri munhu uchifungidzira kumba.
Maitiro ekupa ekushambadzira ekuchenesa zvinopihwa
Kufanana nekuchenesa imba yekugara, kupa kwekushambadzira yekuchenesa inopa kunosanganisira kuziva kuti zvinotora nguva yakareba sei vashandi vako kuchenesa nzvimbo nenzvimbo. Nekudaro, nekushambadzira kwekushambadzira iwe urikuverengawo mitengo yekugadzira (mangani makumbo mana anogona kucheneswa muawa rimwe). Heino zviwanikwa pa pdf uye bhidha calculators kubva TheJanitorialStore.com kutanga.
Kana iwe uine hombe yekutanga Investment uye uchifarira franchise yekuchenesa sevhisi mukana, heino runyorwa rweakanakisa ekugara uye ezvokutengeserana mafranchise mu muzvinasha.com .
Maitiro Ekushambadzira Yako Ekuchenesa Bhizinesi
Kiyi yekutengesa bhizinesi rako rekuchenesaiwe uriko uko vangangove vatengi vanotsvaga masevhisi ako.
Google ndiyo imwe yenzvimbo dzekutanga vatengi vanogona kuenda kunotsvaga vanopa rubatsiro.
Saka nzira yako yekutanga yekuita ingave teerera kuGoogle uye kutsvaga mazwi akakosha senge kuchenesa imba, kuchenesa dzimba, mabasa ekuchenesa, mabasa ekuchenesa, nezvimwe. uye guta / guta rako. Ex. Kuchenesa Imba Boise, Id.
Iwo masayiti / zvinongedzo zvinoonekwa papeji rekutanga reGoogle kunze kwemamwe mabasa ekuchenesa munzvimbo yako ndipo paunoda kuwanikwa nekunyorwa.
Asi usati watambisa nguva yako uye kuyedza kuoneka pane aya masaiti, unofanira kutanga wagadzirakuchenesa webhusaiti yebhizinesi.
A webhusaiti ichakubatsira iwe kuvaka kuvimba nevangangove vatengi uye kukugadzika iwe kure nemakwikwi ako. Ichapawo nzira yekuti vatengi vadzidze zvakawanda nezve izvo zvaunofanira kupa uye nzira yekuti vabate kana kuwana chitauro kubva kwauri.
Usati watanga kushambadzira masevhisi ako, ita shuwa kuudza shamwari dzako uye mhuri paFacebook kuti iwe uchangotanga bhizinesi rekuchenesa uye uvabvunze kuti vaparidze izwi.
Maitiro ekusimudza yako Chikwereti Chikwereti mamaki
Maitiro ekuzadza odha yemari yeiyo IRS
Ungawana sei rezinesi rekuchengeta vakwegura? - Zvese pano
Nzira yekufona sei zvakavanzika muUnited States? - Zadzisa Nhungamiro
Mari inobhadhara mari inoshanda sei?
Ndinoziva sei kuti ndine dhisiti yekudzingwa?